Fitsaboana - AOOD Technology Limited
Ny fahamarinana sy ny fahamendrehana dia iraka ampiasain'ny fitaovana sy fitaovana fitsaboana. Amin'ireo rafitra rehetra ireo dia mametraka fangatahana henjana izy ireo amin'ny zanadrafitra sy ny singa misy azy ireo. Slip peratra ho toy ny electromekanika ampahany izay mamela ny fampitana ny herinaratra / famantarana / angona avy amin'ny faritra mijanona ho faritra mihodina, dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny rafitra fampitana iray manontolo.
AOOD dia nanana tantara hatrizay nanolorany vahaolana slip ring ho an'ny fampiharana ara-pahasalamana. Miaraka amin'ny haitao farany momba ny injeniera, ny fanavaozana maharitra ary ny fahaiza-manaony, AOOD dia nampiasa soa aman-tsara ny valiny azo itokisana sy azo antoka hamahana ny angovo / angona / signal signal ho an'ny scanner CT, ny rafitra MRI, ny ultrasound avo lenta, ny rafitra mammography nomerika, ny centrifuges médical, pendant valindrihana sy jiro fandidiana taratra sns.
Ny tranga mahazatra indrindra dia ny rafi-peratra savaivony lehibe ho an'ny scanner CT. Ny scanner CT dia mila mamindra angona sary avy amin'ny tsipika detector x-ray mihodina mankany amin'ny solosaina fanodinana data ary tsy maintsy tanterahina amin'ny peratra slip. Ity peratra slip ity dia tsy maintsy miaraka amin'ny savaivony anatiny lehibe ary afaka mamindra angona betsaka amin'ny alàlan'ny haingam-pandeha avo. Ny peratra savaivony lehibe AOOD dia izy irery ihany: ny savaivony anatiny dia mety hahatratra 2m, ny tahan'ny fandefasana angona sary dia mety hahatratra 5Gbit / s amin'ny alàlan'ny fantson'ny fibre optika ary afaka miasa azo antoka eo ambanin'ny haingam-pandeha 300rpm.
Vokatra mifandraika: Peratra fitetezana boro lehibe, Amin'ny alàlan'ny peratra bore slip